သူလက်သည်းပေါ်တွင်အနက်ရောင်အစက်အပြောက်ပေါ်လာခဲ့ရာမှသိသနည်း | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အောက်မှာလျှင်, ဒီ, ဗီတာမင် chasnoti အတွက်အလုံအလောက်ကယ်လစီယမ်မရှိကြောင်းအကြံပြုအားနည်းလက်သည်း
ငါအချိန်အတန်ကြာအကြံပေးနက်နောက်ပြီးထံမှမစင်၏အရှည်ပါစေပါဘူး, မကြာခဏကုသမှု, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များရေချိုးဆီ, တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်, သံလွင်, အာရဇ်သစ်သား, လာဗင်ဒါရေနံပြုပါ
ကယ်လစီယမ်တောင့သောက်ရနှင့်သက်ရှိ sedan ကားကြွယ်ဝစေ။
ဒီ tool ဖြင့်အစားထိုး srestvo အရောင် remover acetone ဆံ့မခံပါဘူး !!!
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဤအစက်အပြောက်ပေါ်လာဖြစ်ပါသည်, နားလည်ရန်ရှိသည် ... အဆောက်အဦးပြီးနောက် .... တစ်ဦးမှိုဖြစ်နိုင်ပါသည် ... အရပ်တို့ကိုခွဲပြီးအတွက်အစိုဓာတ်ကိုတစ်ဦးရလဒ်အတိုင်း, အတုပစ္စည်းနှင့်၎င်း၏လက်သည်းပန်းကန်များအကြားဘက်တီးရီးယားရရှိသွားတဲ့ ... မှို ... ကျိန်းသေဆက်ဆံပါ !! !
ယွန်းကနေသည် ... ဒါကြောင့်ပဲ, သင်အတူတကွကြီးထွားအနည်းငယ်ပွတ်နိုင်ပါတယ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်ရဲ့ ... နှင့်လက်သည်းကိုပြောင်းလဲ !!!
longitudinal groove နာတာရှည်ရောင်ရမ်းသောရောဂါများ (paranasal sinuses, အံသွား) ၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြသို့မဟုတ်ဒူလာ starting;
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် groove ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ (ကျောက်ကပ်, အသည်း, အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း) ၏ရောဂါညွှန်ပြစေခြင်းငှါ,
transverse groove ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုခန္ဓာကိုယ်သွပ်ကင်းမဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဇင့်အဓိကအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်အဇာစ်မြစ်၏အစားအစာများတွင်ပါရှိသောဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအဓိကအားသက်သတ်လွတ်စား၎င်း၏မရှိခြင်းကနေခံစားနေကြရသည်။
၏ချိုနှင့်စိတ်ကျလက်သည်းအပ်ချုပ်လက်စွပ်မျိုး psoriasis အကြောင်းကိုသတိပေးတဲ့ signal ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ပေးမယ်ဆိုရင်
အချိန်ပြတင်းပေါက်၏ပုံစံအတွက်လက်သည်းကအရမ်းမကြာခဏအဆုတ်ရောဂါ, ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်, ဒါမှမဟုတ်ကင်ဆာညွှန်ပြ;
ဇွန်း-shaped လက်သည်းသေချာပေါက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကုသရပါမည်သည့်သံချို့တဲ့ခြင်း, ဖော်ပြသည်။
လက်သည်းအရောင်သင်ကပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများရောဂါများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ပဏာမနိဂုံးချုပ်စေရန်ခွင့်ပြုသည်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ သွေးလည်ပတ်မှုပျက်ကွက်, လက်သည်းအစိမ်းရောင်ရှိသောဖြစ်လာသည်။ အဝါရောင်လက်သည်းအရောင်ဟာအနာရောဂါစွဲအသည်းဖော်ပြသည်။ Lumpy အဝါရောင်လက်သည်းဆီးချိုရောဂါအဖြစ်ဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ကြသည်။
မခိုင်မြဲပုံနှင့်လက်သည်း Discoloration အရောင်၏ပိုင်းခြားအလွန်အကျွံဆေးလိပ်သောက်, သည်ညီမျှမှုအစားအစာနှင့်ဒြပ်ဆပ်ပြာနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဖော်ပြသည်။ လက်သည်း delamination လည်းမှုကြောင့်ဗီတာမင် D ကိုမရှိခြင်း, ကယ်လစီယမ်နဲ့ဆီလီကွန်မှတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အဖြူရောင်အစက်အပြောက်သို့မဟုတ်အစက်တစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကယ်လ်စီယမ်၏မရှိခြင်း, Zinc ဖော်ပြသည်။
черные точки это скорее всего так называемые петехии, ломкость капилляров повышенная, ну типа "Синячков" сдайте ккровь на свертываемость, пропейте аскорутин
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,244 စက္ကန့်ကျော် Generate ။